トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "Ilolo", iqabane iimvakalelo?
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa le "Ilolo" isikhundla umva babe nazo ziphicothwa 3500 yen mahala ikhadi umntu isibane endala kwicala lesandla sasekunene mzobo enjalo ufana yedwa, kwaye iza udondolo esandleni sasekhohlo , oko kuthetha ukuba owayesakuba Owasasaza. Ekubeni oko zazotywa ukubonisa kwicala lasekhohlo lalenxaki, imele kuphela kwiindawo zemfundo ezifana ngokutsha kunye nokufunda, ukususela amava amazwe kunye ekundwendweni iyadinga, kwaye sele unike ingcebiso junior neyezingaphambili kuye evakalayo.
In Ilolo wayo umyalelo ikhadi waba ukucebisa imfuneko kwakhona cala Nijonge ngokwam. Isibane kufuneka ngesandla imele kwingcingane wokukhanya, ekubeni iboniswe ukufumana i Yintoni eyenzekayo elungileyo okanye iingcebiso Xa ukuze bacombulule le ngxaki, Ilolo kwekhadi ngumthetho komnwe, iingcebiso ephakamileyo, enentsingiselo, umoya, limele kwaye balumke. Ukuba
Ilolo ezinye iimvakalelo zomntu
Ilolo ikhadi yobume HIV kucingelwa ukuba kuthetha ebonakala kwindawo entle luphawu lokuba iyamkholisa kwakhona Nijonge ngokwakho. Umchasi ufuna kwakhona egumbini ngokunzulu ulwalamano kunye nawe. Abantu zombini iingcinga ukuzama kwakhona ubudlelwane ukuya ngoku ukuze nzulu ngakumbi kukuba phakathi kwabantu ababini, ngokwenene nceda uzame ukuqinisekisa ukuba ngaba iqabane lokwenene omnye komnye.
Ngokwenza umva ngokwazo ukuba ngomoya ngoku omnye komnye ukwenza njalo, kuba ungaphinda-ukubona indlela elizayo enye kwenye, kukho kwakhona iqela kungenzeka ukuba ibe emtshatweni. Kwimeko zabantu ezingabuyekezekiyo uthando iqabane sikwimo ongenako awasuse kubudlelwane kunye nawe.
welinye iqela uzama Mikiwameyo nokuba nawuphi na umntu ekubeni wena, ufanelekileyo neqabane. Ekubeni ixesha nomkhwezeli nokuba enoba nomtsalane, yaye kujoliswe Polish ngokwakho kancinci kude uthando, masenze ukuba ahlale ethobela nangokunyaniseka ngokwakho. Of
yedwa Ukuba nezinye iimvakalelo zomntu
Ilolo ikhadi kwindawo umva Kucingelwa ukuba kuthetha yaphuma kwindawo umva ngokunxulumene umdlali wenu, ithemba kwaye akufuni Fukairi. Ngelo xesha, ke original, nto leyo licinezelwe nxamnye elinye iqela kuphela iimvakalelo bakho neentanda ubuhlobo. Okokuqala makhe kwabo ngumntu omnye ukuya kwelinye icala, ngoko ke nceda unike ithuba lokucinga. Abantu uthando ezingabuyekezekiyo na imeko ukuba elinye iqela akafuni ukuthanda ngenkuthalo. Xa
Ndinixelele iimvakalelo zabo umdlali enjalo, oko kuya kuba ndikuthiyile nto yakho. Ukuze ube langoku ubenomtsalane welinye icala, Toka aphume ukuhamba, ezifana khawuzame izifundo, nceda uzame kwakhona iimvakalelo zakho ngokuthatha ixesha lokuba abe introspective.